I-Andavelo House Luxurious Suite - I-Airbnb
I-Andavelo House Luxurious Suite
Igumbi e-i-boutique hotel ibungazwe ngu-W David & Priscillia
U-W David & Priscillia uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
I-Andavelo House iyindlu kadokotela esanda kuvuselelwa enamakhulu ayisithupha ehlala edolobheni elidala laseLamu, eKenya. I-Andavelo House icishe ibe ngu-800 m2 enefenisha eyenziwe ngokwezifiso eqokwe kahle kuwo wonke ama-suites nezindawo ezivamile.
Indlu yethu inabasebenzi ngokugcwele. Ukuhlanza nsuku zonke kanye nezinsiza eziyisisekelo zihlinzekwa. Izinkonzo zokudla kwasekuseni nezokupheka zihlinzekwa ngenkokhelo uma ucelwa.
Abasebenzi bethu bangakusiza ngokubhuka isikebhe noma ukukunikeza ulwazi nganoma yiziphi izindawo ezikhangayo zasendaweni.
Sibhukha amasudi angawodwana alingana abantu ababili. Uma kufika izihambeli ezengeziwe, kuzodingeka zibhukhe amanye amasudi.
Wonke ama-suites anezindlu zawo zokugezela ezihlome ngokuphelele futhi anezindawo ezipholile futhi amaningana awo amasimu okubuka ulwandle.
Sinedamu lokubhukuda elitholakalayo izivakashi kanye nezindawo ezivamile ezivamile kokubili ngasechibini nasethafeni phezu kokubuka idolobha, ulwandle kanye nesiqhingi esiseduze saseManda.
Ukuthatha bese ubuyela esikhumulweni sezindiza kunikezwa ngesicelo
Indlu yethu inabasebenzi ngokugcwele. Ukuhlanza nsuku zonke kanye nezinsiza eziyisisekelo zihlinzekwa. Izinkonzo zokudla kwasekuseni nezokupheka zihlinzekwa ng…
4.98 (izibuyekezo ezingu-113)
I-Andavelo House iphakathi nendawo yedolobha laseLamu elivikelwe yi-UNESCO. Indlu yethu isendaweni ephakeme kancane yedolobha enikeza imibono yedolobha nolwandle. Sikude ngamaminithi ukusuka eLamu Fort, sihlanganyela izindonga nomnyuziyamu weSwahili House kanye namabhulokhi ambalwa ukusuka endaweni yezitolo enkulu yaseLamu lapho zonke izinhlobo zezingcweti zendawo zithengisa khona imisebenzi yazo yezandla.
Ibungazwe ngu-W David & Priscillia
Sifinyeleleka nge-imeyili noma ngocingo. Izisebenzi zethu ziyatholakala ukuze zisize izivakashi esizeni, kodwa zinikeza ubumfihlo obuphelele kubavakashi bethu.